दशैं सकिए लगतै आउँदै करोडौंको आइपिओ ! कुन कम्पनी ? हेर्नुहोस् !
काठमाडौँ – सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले आगामी कात्तिक ४ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु सात करोड ३० लाख मूल्य बराबरको सात लाख ३० हजार कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) को बिक्री खुल्ला गर्ने लागेको हो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २२, २०७८१३:०७